भोलि श्रावण २९ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! - kageshworikhabar.com
भोलि श्रावण २९ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
भोलि मिति वि.सं.२०७८ साल श्रावण २९ गते । शुक्रबार। तपाईंको भोलिको राशिफल
आर्थिक र व्यावसायिक दृष्टिले दिन लाभदायक छ । व्यवसायको लागि योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। परोपकारको उद्देश्यले गरिएको कार्यले मन प्रफुल्लित हुनेछ । आर्थिक लाभको आशा राख्न सक्नुहुन्छ । बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
परिश्रमको अनुपातमा अल्प परिणाम मिल्नाले निष्ठापुर्वक कार्यलाई अगाडी बढाउनु हुनेछ । तपाईंको क्षेत्रको विशालता र बोलीको मधुरताले अन्य व्यक्तिलाई प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ । कला तथा पढाई-लेखाईमा रुची रहनेछ ।
अत्यधिक भावनाशीलले तपाईंको मनलाई संवेदनशील बनाउनेछ । विशेष रुपले जलाशय र स्त्रीवर्गबाट सचेत रहनु पर्नेछ । आमाको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य खराब होला ।
कार्य सफलाताले नयाँ बाटो देखाउनेछ । यसकारण तपाईंको आनन्द-उत्साह बढ्नेछ । मन ताजा र प्रफुल्लित अनुभव गर्नुहुनेछ । मित्र र आफन्तसँग भेट हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछ ।
तपाईंको दिन मिश्र फलदायी रहला । कार्य निर्धारित सफलता मिल्नेछैन । परिवारमा मेल-मिलापको वातावरण रहनेछ टाढा बस्ने आफन्तसंग संदेश व्यवहार लाभदायक साबित हुनेछ । आम्दानीभन्दा धेरै खर्च हुन सक्ला ।
तपाईको प्रतिष्ठा वृद्दि हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी खुशी रहनेछन् । परिवारमा आनन्दमय वातावरण रहनेछ । पिता तथा सरकारको म४३
तर्फबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । आर्थिक योजना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ।
Previous articleलुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
Next articleनौ लाख लुटपाटको आरोपमा दुई जना पक्राउ